बिनाकरको मनोरञ्जन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नेपाली समाजका धेरै जिउँदा मान्छेहरुले बेलाबखत उदाहरणका लागि प्रस्तुत गर्ने एउटा नीति कथा यस्तो छ ः
एक जना व्यक्ति थिए । तिनलाई सबैले विद्वान् भन्थे । उनी सक्कली विद्वान् थिए वा थिएनन्, जोख्ने कुनै भरपर्दो तराजु नभएको हुँदा मानिदिऊँ उनी साँच्चैका विद्वान् थिए । विद्वान् प्रमाणित हुनका लागि दुनियाँका के–के ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ, आजसम्म कसैले नियमसंगत तरिकाले घोषणा नगरेको हुँदा हचुवाका भरमा कसैलाई विद्वान् भनिने चलनअनुसारै ती व्यक्ति विद्वान् थिए । तिनले अंग्रेजी बोल्न जानेका थिए, लेख्न पनि आउँथ्यो । संस्कृत भाषा बोल्थे, लेख्थे पनि । संसारमा कतिवटा देश छ, उनलाई कण्ठै थियो । ती राष्ट्रका राजधानीका नाउँहरु कण्ठै थियो । भारतको राजधानी नयाँदिल्ली, अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी, नेपालको काठमाडौँ, चीनको बेइजिङ, बेलायतको लन्डन आदि । प्रायः सबै राष्ट्रका मुद्राबारे पनि जानकार थिए । अमेरिकी पैसालाई डलर, नेपालको रूपैयाँ, भारतको रूपयेँ, इराकको दिनार, जापानको येन, बेलायतको स्टर्लिङ पाउन्ड आदि आदि । अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका उनलाई सबैले डाक्टरसाब पनि भन्थे । उपचार गर्ने डाक्टरी कोर्स तिनले नजाने पनि झाडापखाला सडेगलेको खानेकुरा खाँदा हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो । थाहा नपाउनेहरुलाई उनी निकै ठूलोठूलो स्वरमा झाडा–पखालाबाट बच्ने उपाय बताउँथे । लामखुट्टेले निकै डरलाग्दा रोगहरु मानिसलाई सारिदिने गर्छ पनि भन्थे । मेनिन्जाइटिस रोग लागेपछि मान्छे तंग्रिन निकै कठिन हुन्छ भन्थे । आँखामा लाग्ने रतन्धो र मोतीविन्दु कसरी हुन्छ र त्यसको उपचार गर्न कहाँ जानुपर्छ पनि सिकाउँथे । त्यतिमात्रै होइन, बौलाहा कुकुरले टोक्यो भने रेबिज नामको निको नहुने रोग पनि लाग्न सक्ने बताउँथे । कुकुरबाट सावधान रहन र कुकुरले कथंकदाचित टोकिहालेको खण्डमा एन्टीरेबिज भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ पनि भन्थे । रासायनिक मल र विषादीको मात्रा ज्यादा भएको तरकारी र अन्न खानै नहुने सल्लाह पनि दिन्थे । अर्गानिक फलफूल, तरकारी र अन्न खाँदा रोगबाट बच्न सकिने सल्लाह दिन्थे । कसैले सर्प मान्न खोज्दैछ भने मार्न हुँदैन, सर्पले अक्सिजनमा हुने विषको मात्रा घटाउन मद्दत गर्छ भन्थे । कसैले फोहोर कपडा पहिरियो भने सफा पहिरिनुपर्छ भन्थे । ती व्यक्ति अरुलाई यसरी सल्लाह दिन्थे, मानौँ उनलाई सबै समस्याका ओखतीहरु राम्रैसँग थाहा छ । यिनलाई सबैले यही कारणले विद्वान्ज्यू भन्थे । यिनको व्यवहार सबैलाई फलिफाप हुने खालको थियो, तर यिनको एउटा खराबी पनि थियो । यिनले अरुलाई नजान्ने र कमजोर महसुस गर्थे र ती कमजोर महसुस गरिएका मान्छेहरुलाई हेरेर मनोरञ्जन लिन्थे । खुब रमाउँथे । कुम हल्लाइहल्लाई अर्ती र उपदेश दिन्थे । त्यतिबेला उनी “कठै बिचरा ! तपाईंलाई त यति सानो कुरा पनि थाहा रहेनछ” भन्दै उपदेशको बाढी ओकल्थे । यिनको बानी यस्तै छ भन्ने थाहा पाएकाहरु मुसुमुसु हाँस्थे । कोही आफू अपमानित भएको ठानी रिसाउँथे पनि ।
एक दिन विद्वान्लाई साढे सातको दशाले घप्लक्कै छोप्यो । नदी तरेर पारि गाउँमा भान्जाको विवाहको निम्तो मान्न जानुपर्ने भयो । त्यसैदिन पारि नगई नहुने भएकाले ती विद्वान् भान्जाकहाँ जाने निधोका साथ कुटुरो बोकेर छाता–टोपी मिलाएर नदीछेउ पुगे । त्यसदिन नदी तर्नका लागि कोही थिएनन् । एउटा डुंगा थियो । डुंगाछेउ चुरोट पिउँदै एउटा माझी उभिएका थिए । गमक्क पर्दै हतार भएजस्तो अभिनय गर्दै विद्वान् डुंगामा उक्लिए । “चाँडो जाऊँ मलाई हतार छ” भने । माझीले चुरोटको ठुटो भुइँमा फाले र डुंगा खियाउन थाले । अरुलाई हेपेर निःशुल्क मनोरञ्जन लिन लागेको बानी विद्वान्ले किन छाड्थे । उनी सुरू भइहाले, सोधे– “ए माझी भाइ, तिमीलाई अंग्रेजी बोल्न आउँछ ?” माझीले आउँदैनको संकेत गर्न मुन्टो हल्लायो । “संस्कृत पनि आउँदैन होला नि ?” माझीले ओठ लेप्य्राएर आउँदैनको संकेत ग¥यो । अमेरिकाको राजधानीको नाम थाहा छ ? विद्वान्ले फेरि सोधे । माझीले जवाफ दियो– थाहा छैन । विद्वान्ले पचासमा पचास जोडे कति हुन्छ ? भनी सोधे । माझीले जवाफ दियो, “थाहा छैन हजुर ।” पारि पु¥याएको ज्याला कति लिन्छौ ? विद्वान्ले सोधे । “माझीले १० रूपैयाँ हजुर” भन्यो । दसको नोट चिन्छौ ? विद्वान्ले सोधे । माझीले झर्को नमानी जवाफ दियो र भन्यो–“चिन्दिनँ हजुर ।” विद्वान्ले झोक्किएर भने, “जिन्दगीमा केही पनि जानेका रहेनछौ, तिम्रो जिन्दगी खेरै गयो ।”
विद्वान्को जवाफ सुनेर माझीले एक सेकेन्डका लागि आँखा चिम्लिए र मुस्कुराएर भने, “हो हजुर, मैले केही पनि जानेको छैन, म अशिक्षित हुँ । मेरो जीवन खेरै गएको छ ।” एकैछिन मौनता छायो । दुवै बोलेनन् । अकस्मात् नदी सुसाउन थाल्यो । माझीले थाहा पाइहाल्यो कि अब नदीमा बाढी आउँदै छ । डुंगा पल्टाउन पनि सक्छ । हतारिँदै माझीले विद्वान्लाई सोध्यो, “विद्वान्ज्यू, हजुरलाई पौडी खेल्न आउँछ ?” नदीमा बाढी आउने संकेत छ, बाढीले डुंगा पल्टाउन सक्छ । तपाईं पौडिएरै अब पारि तर्नुपर्छ ।” माझीको कुरा सुनेर विद्वान्को सातो उड्यो । “माझी भाइ, मलाई पौडिनबाहेक सबै आउँछ । लौन, मलाई जसरी पनि जोगाएर पारी पु¥याइदेऊ ।” माझीले भन्यो, “म आफू त पौडेर पारि जान सक्छु, हजुरलाई त सँगै लान सक्दिनँ । मैले सँगै लाने प्रयास गरेँ भने म पनि बाँच्दिनँ । त्यसकारण, मलाई मेरै ज्यानको माया छ । तपाईं आफ्नो बन्दोबस्त आफैँ गर्नुहोला ।”
माझीको कुरा सुन्नेबित्तिकै विद्वान्को आँखाबाट बरर आँसु
झ¥यो । धेरै चीज जानेको छु जस्तो लाग्थ्यो, आखिरमा केही जानेको रहेनछु भन्दै माझीका अगाडि जिन्दगीको भीख मागे । तर, माझीको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय थियो । बाढी आयो । डुंगा घोप्टियो । विद्वान् कता हराए कता । बगेर विद्वान् मरे । माझी पौडेर बाहिर निस्किए । यो घटना माझीले आफू बूढो भएर डुंगा चलाउँदासम्म आफ्ना नातिनातिनालाई भनिरह्यो– “सबै चीज जानेको छु भन्ने विद्वान् पौडिन नजानेर मरे ।”
आफूभन्दा कमजोर र कम पढेका वा नपढेका मानिसलाई हेपेर निःशुल्क मनोरञ्जन लिन पल्केका कथित विद्वान् त्यसरी मरेको कथा सुन्दा आज पनि सम्झना आउँछ कि यो समाजमा त्यस्ता अनगिन्ती मूर्ख मान्छेहरु छन् जसले आफूभन्दा कमजोरलाई हेरेर मनोरञ्जन लिइरहेका छन्, त्यो पनि शुल्क तिरेर होइन, निःशुल्क ।
संसारका हरेक मुलुकमा मनोरञ्जन कर उठाइन्छ । सिनेमा बनाइन्छ । सिनेमा हेरेर मनिसहरुले मनोरञ्जन प्राप्त गर्छन् र टिकटमा मनोरञ्जनबापत्को कर उल्लेख गरिन्छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ, “मनोरञ्जन सित्तैमा गर्न पाइँदैन । मनोरञ्जनबापत् कुनै न कुनै प्रकारको कर तिर्नुपर्छ । धनी मान्छेले गरिबलाई हेरेर मनोरञ्जन प्राप्त गर्छन् । आफ्नो छेउमा गरिबलाई बोलाउँछन्, दानचन्दा दिन्छन् र त्यसबाट मनोरञ्जन लिन्छन् । गरिबहरु धनीका लागि मनोरञ्जनका साधन हुन् । मनोरञ्जनबिना मानिस बाँच्नै सक्दैन । यो कोणबाट गरिब मान्छेको उपस्थितिबिना धनी मान्छेहरु बाँच्नै सक्दैनन् । गरिब त कुनै पनि हालतमा चाहियो, चाहियो । धनीका मनोरञ्जनका लागि चाहियो । सबै जना बराबरका धनी भए भने वा कुनै पनि मानिस वरिपरि गरिब देखिएन भने मेहनत गरेर, ठगेर वा भ्रष्टाचार गरेर धनी हुनुको कुनै अर्थ छैन । यी सबै काम गरिनुका पछाडि गरिब मान्छेको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको छ । घुमाउरो पाराले मिलाइमिलाई समाजमा गरिब उत्पादन गर्ने काम यही मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको हुन्छ । त्यसकारण, संसारमा गरिब मान्छेहरुको संख्या सधैँभरि रहिरहन्छ । संसारबाट कहिल्यै गरिबी समाप्त हुँदैन । किन हुँदैन भने मनोरञ्जनबिना मान्छे बाँच्न सक्दैन । गरिबका मनोरञ्जनका साधन अरु नै हुन्छन् । धनीका मनोरञ्जनका साधन भनेका चाहिँ जिउँदा गरिब मान्छेहरु नै हुन् ।
पढाइमा कुनै प्रथम हुन्छ, कुनै द्वितीय, कुनै तृतीय, कोही पास त कोही फेल । पहिलो हुने दोस्रो हुनेलाई हेरेर मनोरञ्जन लिन्छ भने दोस्रो तेस्रोलाई हेरेर । तेस्रो हुने पासमात्रै हुनेलाई हेरेर मनोरञ्जन प्राप्त गर्छ भने पासमात्रै हुनेले फेल हुनेलाई हेरेर मनोरञ्जन प्राप्त गर्छ । त्यसकारण, मनोरञ्जनको आवश्यकता भएकै कारण कसैलाई फेल बनाइन्छ । फेल हुनेहरु सबैका लागि मनोरञ्जनका साधनहरु हुन् । टन्न अघाएकाहरु भोकाहरुलाई हेरेर मनोरञ्जन प्राप्त गर्छन् । कुनै–कुनै अघाएका पेटहरुले खाली पेटहरुलाई पनि यदाकदा सहयोग गर्लान्, तर त्यो खालको सहयोगका पछाडि मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने उद्देश्य प्रस्ट देखिन्छ । कार चढ्नेहरु मोटरसाइकलवालालाई हेरेर मनोरञ्जन लिन्छन् । मोटरसाइकल चढ्नेहरु साइकलवालालाई हेर्छन् र मुस्कुराउँछन् । साइकल चढ्नेहरु पैदलयात्रीलाई देखेर मनोरञ्जन प्राप्त गर्छन् । कुल मिलाएर कमजोर ठानिएका र गरिब बनाइएका मान्छेहरु शक्तिशाली, धनी र कथित शिक्षितहरुका लागि निःशुल्क मनोरञ्जनका साधनहरु हुन् । यसरी हेरेर मनोरञ्जन लिने चलन कति ठीक वा कति गलत छ, त्यो व्याख्या विश्लेषण भविष्यमा हुँदै जाला, तर त्यतिविघ्न मह¤वपूर्ण सावित मनोरञ्जनका साधनहरुलाई बाँच्नेसम्मको अवस्थामा पनि नपु¥याउने गरिएको वर्तमान अवस्था जुन छ, यसबाट घाटा भने धनीहरुलाई हुने छ । आफूलाई शिक्षित ठान्ने सक्कली मूर्खहरुलाई हुने छ । आफूमात्रै सक्षम छु, अरु सबै असक्षम र कमजोर काम नलाग्ने छन् भन्ने सोच्नेहरुलाई हुने छ । निःशुल्क मनोरञ्जन लिनेहरु सावधान !